Angkor any Kambodza miroborobo miaraka amin'ireo mpitsidika iraisam-pirenena 2.6 tapitrisa amin'ny taona 2018
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Angkor any Kambodza miroborobo miaraka amin'ireo mpitsidika iraisam-pirenena 2.6 tapitrisa amin'ny taona 2018
Angkor dia iray amin'ireo toerana arkeolojika manan-danja indrindra any Azia atsimo atsinanana izay hita ao amin'ny faritany avaratr'i Kambodza Siem Reap. Mandritra ny 400 km2 eo ho eo, ao anatin'izany ny faritra misy ala, ny Parkor Archaeological Angkor dia ahitana ny sisa tavela amin'ireo renivohitra samihafa amin'ny Empira Khmer, nanomboka tamin'ny 9 ka hatramin'ny taonjato faha-15. Anisan'izany ny Tempolin'i Angkor Wat malaza ary, ao Angkor Thom, ny Tempolin'i Bayon miaraka amin'ireo haingon-trano sokitra maro be. UNESCO dia nanangana programa malalaka mba hiarovana ity tranonkala an'ohatra ity sy ny manodidina azy.
Nandray mpitsidika iraisam-pirenena efa ho 2.6 tapitrisa ny Valan-javaboary Angkor tamin'ny taon-dasa, ka nahazoana vola mihoatra ny $ 100 tapitrisa. Navoaka ary navoakan'ny fampahalalam-baovao Kambodza io isa io androany.
Ny Angkor Park dia nahitana fiakarana 5.45 isan-jaton'ny mpitsidika hatramin'ny 2.59 tapitrisa tamin'ny taon-dasa, raha ny fidiram-bola tamin'ny fivarotana tapakila kosa dia nitsambikina valo isan-jato, ka nahazoana $ 116.64 tapitrisa.
Ny fidiram-bola dia nihena 1.59 isan-jato hatramin'ny $ 12.11 tapitrisa tamin'ny volana desambra na dia nitombo 0.16 isan-jato aza ny isan'ireo mpitsidika ny fizahan-tany fizahan-tany an'ny Fanjakana anglisy ka nahatratra 267,647.
Ny tranokalan'ny tempoly no mpilalao manintona ny mpizahatany ary loharanom-bola an-tapitrisany dolara ho an'ny firenena, hoy ny talen'ny departemantan'ny fizahantany Siem Reap, Ngov Seng Kak.
Ny tempoly toa an'i Angkor Wat, ny Bayon, Preah Khan, ary Ta Prohm, ohatra amin'ny maritrano Khmer, dia mifandray akaiky amin'ny tontolon'izy ireo ara-jeografika ary koa manana fotokevitra manan-danja. Ny maritrano sy ny firafitry ny renivohitra nifandimby dia manaporofo ny filaminan'ny filaminana sy ny laharana ambony ao anatin'ny Empira Khmer. Angkor, noho izany, tranokala lehibe maneho ny soatoavina kolontsaina, fivavahana ary tandindona, ary koa misy lanjany lehibe amin'ny maritrano, arkeolojika ary ny kanto.
Honenana ny valan-javaboary, ary tanàna maro, ny sasany izay razamben'ny razamben'i Angkor no niparitaka nanerana ny valan-javaboary. Ny mponina dia manao fambolena sy fiompiana vary manokana. Ny birao fizahan-tany eo an-toerana dia maniry ny fizahan-tany ny mpizahatany voajanahary sy tontolo iainana mpizahatany izay manintona ny mpizahatany iraisam-pirenena rehefa avy mitsidika ny faritra Angkor.
Ny sehatry ny fizahan-tany any Kambodza dia miaina fitomboana mahatalanjona, satria mitsidika ny mpitsidika iraisam-pirenena ny hatsarana voajanahary sy ny zava-manintona ara-kolontsaina.
Nandritra ny 10 volana voalohany tamin'ny taon-dasa, nampiantrano mpizahatany iraisam-pirenena maherin'ny 4.82 tapitrisa i Kambodza, raha 5.6 tapitrisa kosa tonga nitsidika ilay Fanjakana tamin'ny 2017.
Ireo mpizahatany sinoa no mitana ny laharana voalohany, arahin'ireo mpizahatany avy any Vietnam, Laos, Thailand ary Korea atsimo, raha ny angom-baovao avy amin'ny Ministeran'ny fizahan-tany.
Ny tetikasan'ny governemanta izay hitsidihan'ny mpitsidika fito tapitrisa ny fanjakana amin'ny taona ho avy.
Taom-baovao amin'ny lamasinina any Shina: 11.5 tapitrisa no nanana an'io hevitra io
Goa: Aiza ireo mpizahatany?